Angelina Jolie Oo Soo Saaraysa Filim Qiso Dhabb Ah Xambaarsan Oo Lagu Magacaabo “Africa” | Hawraar
September 20, 2014 Taariikhda Fanaaniinta Aduunka, Xiisaha/Xulashada No comments
Angelina Jolie Oo Soo Saaraysa Filim Qiso Dhabb Ah Xambaarsan Oo Lagu Magacaabo “Africa”
Aktarada caanka ah ee reer Hollywood, Angelina Jolie ayaa shaaca ka qaaday in dhawaanay ay matali doonto, filim cusub oo qaab ahaan maad iyo majaajilo u badan, laguna magacaabo, “Africa”, kaas oo laga soo dheegtay qiso dhab ah oo ku saabsan, kana dhacday qaarada Afrika.
Sida shabakadaha wararka ee Hollywood ku warameen, Angelina Jolie oo 39-jir ah, waxa ay ku guda jirtay, xafidaada iyo isku diyaarinta filimkeedan cusub, kaas oo sheekadiisa uu qoray nin dhawaan filim uu hore u sameeyay, ku guulaystay abaal marinta Oscar-ka, kaas oo lagu magacaabo, Eric Roth, waxaanu ka diyaariyay sheekada filimka, qiso dhabb ah oo la xidhiidha nin ka shaqayn jiray, ilaalinta ugaadha ee afrika.
Sida shabakada Hollywood Deadline ku warantay, qisada filimkan ayaa laga soo qaatay nin aad ugu dagaalami jiray, daryeelka Maroodiga Africa dagaal badana la galay dadka fool Maroodiga ugaadhsada, kaas oo lagu magacaabi jiray Richard Leakey.
Ninkan ayaa isagu ka mid ahaa xubno ama dad faro ku tiris ah oo sideetamaadkii qarnigii hore ku kaliyaystay ilaalinta fool maroodiga iyo dagaalka budhcada ka ganacsada, waxaanu ninkaasi noqday ka markii ugu danbaysay dunidu u soo noqotay dedaalkiisi ee la caalamiyeeyay.
Aktarada Angelina Jolie oo wakhtigan ku jirta shahru casalkii arooskeeda, kuna sugan dooni iyada iyo saygeeda ay dhawaan is guursadeen ee Brad Pitt, ku wada dalxiisayaan doonida kuwa lagu tamashleeyo ah, oo todoba milyan oo dollar ay ku kiraysteen, waxa hore loo shaaciyay in ay filim ku saabsan khilaafka qoyska wada matalayaan saygeeda.
Laakiin waxa imika soo baxay in filimka Africa ay matalayso, kaas oo hadal kooban oo ay ka tidhi ay ku sheegtay, in qaarada afrika saamayn ku yeelatay nolosheeda, sida halbowlaha dhiigana ay ka qayb qaadanayso dareenkeeda, “Waxaan noqday qof afrika aad ugu dhow, waxa matalaada filimada is xigay ee qaarada ku saabsani iga dhigeen, mid ilaa xad ku xidhan oo dhiigeeda ay raacday qaarada iyo dhaqankeedu.”
Filimkan ayaa waxa kale oo ka mid ah soo saarayaashiisa kuwa ugu caalamisan looguna jecel yahay Hollywood, sida David Ellison, Dana Goldberg, Jon Peters. Jolie iyo Roger Deakins, kuwaas oo si gaar ah uga dhex caalamadaysan shirkada filimada soo saarta dalka Maraykanka ee Hollywood.